June 15, 2021 - ApannPyay Media
သွေးတိုးရောဂါများအတွက် လက်တွေ့ပျောက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
June 15, 2021 by ApannPyay Media
သွေးတိုးရောဂါများအတွက် ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ လက်တွေ့ပျောက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး သွေးတိုးရောဂါများအတွက် ကြောက်စရာမလိုတော့ပါ….လက်တွေ့ပျောက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်… တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံဆေးခဏ်းတွေသွားကုတယ်မပျောက်ပါ ငွေကုန်လူပန်း ဖြစ်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာဘုံးဘုံးလဲပြီး သူကိုယ်သူ(သေ) စာရင်းသွင်းထားတဲ့လူကို ကျွန်တော်တွေ့လို့ဒီဆေးမြီးတိုလေးပေးခဲ့ပါတယ် လူနာကမရုံမှာကြောက်လို့ လူနာကိုမှာခဲ့သေးတယ်။ ဒီဆေးကိုနေ့စဉ်တလတိတိသေက်ဘို့နဲ့. အကယ်၍မပျောက်ခဲ့သော် ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေများကို ကျွန်တော်မှပြန်လျော်ပေးမည့် ဂတိလဲပေးခဲ့ပါတယ် နောက်တ.လအကြာမှာ တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့လူနာကို သွားကြည့်တော့ လူနာကလူကောင်းဖြစ်လို့. ဝလို့. စိုလို့. အံ့သြဘွယ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၂)လောက်ကပါ ၂၀၁၆…ခုကသွေးတိုးရောဂါကျွန်တော်မှာဖြစ်တယ် သွေးချိန်ကြည့်တော့အောက်သွေး(၁၂၀)အပေါ်သွေး(၁၉၀) ပါဆရာမကဂရုစိုက်ကုဘို့ပြောပြီး သွေးကျဆေးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတရားစခန်းပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန် တရားစခန်းအကျိုးတော်ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ ဆေးဖော်ဘို့အချိန်ကမရနဲ့. တရားစခန်းပွဲလဲပြီး အောက်ဖော်ပြမည့် ဆေးမီးတိုကို.(၁၃)ရက်နေ့စဉ်သောက်လိုက်တာ….. ခုတော့ဗျာ မုန့်ဟင်းခါး ဝက်သားကြိုက်တာစား ယ္ခုစာရေးနေချိန်အထိ(ဒေါင်ဒေါင်လန်.)ဘဲဗျာကဲဆေးနည်းကလွယ်လွယ်လေး …. (၁)နွားနို့စစ်စစ် ၁. ပိသာ (၂)ကြက်သွန်ဖြူ. (ဥတလုံး)..၇…လုံးနွားနို့ကိုဆူအောင်ကြိုပါ … Read more
ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေတဲ့ ကြက်သွန်နီသံပုရာဆမ်း ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက်စေတဲ့ ကြက်သွန်နီသံပုရာဆမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ သံပု ရာဆမ်း အချဉ်ကို ထမင်းနဲ့ စားစား ဘာနဲ့ စားစား များများစာပေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးများစေပါတယ်။ အလွန်ရိုးရှင် ပြီး လုပ် ရ လွယ်ကူတဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ဆေးနည်း တမျိုးဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်နီ သံပုရာ ဆမ်း ပြုလုပ်ပုံလေးကတော့ ၁။ ကြက်သွန်နီကို ဖင်ဖြတ်၊ ခေါင်းဖြတ်၊ အခွံခွါပါ ၂။ ပုံထဲက အတိုင်း အကွင်းလိုက် လှီးထားပါ။ ရေမဆေးပါနဲ့ ၃။ ကြက်သွန်နီပေါ်ကို သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်ပါ ၄။ ချိုတဲ့ အရသာ ပေါ်လာပါမည် ။ မွန်တဲ့ အနံ့များ ပျောက် သွားမည် ၅။ … Read more
ပါဝါ(၃ဝဝ)မျက်မှန်ထူကြီးတွေ လွင့်ပစ်ရတယ်ဆိုပြီး သက်သေသာဓကတွေနဲ့ နာမည်ကြီး ဆေးငရုပ်
ပါဝါ(၃ဝဝ)မျက်မှန်ထူကြီးတွေ လွင့်ပစ်ရတယ်ဆိုပြီး သက်သေသာဓကတွေနဲ့ နာမည်ကြီး ဆေးငရုပ် ပါဝါ(၃ဝဝ)မျက်မှန်ထူကြီးတွေ လွင့်ပစ်ရတယ်ဆိုပြီး သက်သေသာဓကတွေနဲ့ နာမည်ကြီး ဆေးငရုပ် ဆေးငရုပ်ကိုသိတဲ့သူ အားလုံးနီးပါး “ မျက်စိအားတိုးဆေး ” လို့ဘဲ သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နဲနဲလေး ထပ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုစေတဲ့ အခြားဓါတ်ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ပါဝင်နေသေးဒါကိုလည်း လေ့လာလို့ ရပါမယ်။ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးမှာ သုံးလာခဲ့ဒါတော့ နှစ်ပေါင်း (၂ဝဝဝ) ကျော်ပြီလို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးလာကြပြီး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဥရောပဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖောက်နေဒါကိုလည်း လက်ရှိတွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူ့အရသာဟာ ချိုပြီး အစိမ်းဝါးစားလို့ရတယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည်လိုဖြစ်စေ လက်ဘက်ရည်ပုံစံဖြစ်စေ စိမ်သောက်လို့ရပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုသော ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ အာဟာရဓါတ်တွေ အများကြီးပါဝင်တယ်။ အပြင်စကားနဲ့ပြောရရင် … Read more
ခဝဲသီးချိုချိုလေးကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ခဝဲသီး ဆိုတာအစိမ်းရောင်အခွံလေးရှိပြီး စောင်းလေးတွေပါတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ အခွံကိုနွှာလိုက်တဲ့အခါ အတွင်းက အဖြူရောင်အသားခပ်ပွပွလေးကို ပါးပါးလေးလှီးလို့ ပုစွန်စိမ်း၊ ပုစွန်ခြောက်တို့နဲ့ အရည်သောက်လေးချက်စားလို့ရပါတယ်။ အရသာက ခပ်ချိုချိုလေးရှိပြီး စားရတာတော်တော်လေး အရသာရှိတာပါ။ အရန်ဟင်းအဖြစ်စားလို့ရပါတယ်။ ခဝဲသီးမှာပါတဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ စားလို့ကောင်းတဲ့ ခဝဲသီးမှာ ဒီဓါတ်လေးတွေပါတယ်နော်။ ကယ်လ်လိုရီ၊ဖောလိတ်၊ကယ်လ်ရိုတင်း၊လူတင်၊ဗီတာမင် A၊ဗီတာမင် B၊ဗီတာမင် C၊ကယ်လ်ဆီယမ်၊ဇင့်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊မဂ္ဂနိ၊မဂ္ဂနီဆီယမ်၊သံဓါတ်၊အမျှင်ဓါတ်၊ရေဓါတ်တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်လဲ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီး ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ ခဝဲသီးလေးက စားလိုက်ရင် အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးသန့်စေတယ် ခဝဲသီးကို မကွာခဏစားပေးတာကခန်ဓါကိုယျတှငျးက အဆိပ်အတောက်တွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးသန့်စေပြီး အသည်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် အသည်းထိခိုက်တာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းမှန်စေနိုင်တယ် အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝမှုက အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်မှုကင်းဝေးစေပြီး အစာအိမ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ … Read more
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အကျိုး (၁၀) ခု
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အကျိုး (၁၀) ခု မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အကျိုး (၁၀) ခု ရုံးပတေသီးဟာ အတို့အမြှုပ်ပဲလုပ်လုပ်၊ ဟင်းချက်ပဲစားစား၊ ကြော်ပဲစားစား၊ ဟင်းခါးလုပ်ပြီးပဲသောက်သောက် ဘက်စုံစားနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက် ရုံးပတေသီးဟာ မိန်းကလေးတွေအတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေးစွမ်းတစ်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီတော့ ရုံးပတေသီးစားပေးခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်တဲ့ အံ့မခမ်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1) Carotenoids ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် မျက်လ့းကို အားကောင်းစေပါတယ်။ (2) ဒီအပြင် Carotenoids ဓာတ်ကပဲ အသားအရေပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အားပေးကူညီပေးပါတယ်။ နေလောင်တာတွေနဲ့ အရွယ်တင်နိုပျိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အထောက်အကူပြုမှာပါ။ (3) သွေးနီဥလျော့နည်းခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ (4) ဗီတာမင် စီ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် anti-oxidant … Read more
မိုးရာသီဝင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် ရောဂါများကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ
မိုးရာသီဝင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် ရောဂါများကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ မုတ်သုန်ရာသီ နီးကပ်လာသည် နှင့်အမျှ အနောက်တောင်လေတိုက်ခတ်၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း နှင့်အတူ ပါရှိလာသည်မှာ ရာသီအကူးအပြောင်းတွင် ဖြစ်တတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ဖျားနာရောဂါ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်များသော ရောဂါများမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အအေးမိဖျားနာခြင်းနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါတို့မှာ ထိုရောဂါများ မဖြစ်အောင် ကူညီပေးမည့် ကျွမ်းကျင်သူတို့၏ အကြံပြုချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေကိုသန့်ရှင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါ မိုးရာသီတွင် ရေအရင်းအမြစ်တို့သည် ညစ်ညမ်းလွယ်ပြီး မသန့်ရှင်းသော ရေမှတစ်ဆင့် အသားဝါရောဂါ၊ အထက်လှန်အောက်လျှောရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ သောက်သုံးနိုင်ရန် ရေကိုကြိုချက်၍ သောက်ခြင်း၊ သန့်စင်ထားသော သောက်ရေသန့်တို့ကို သောက်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။ လက်သုတ်ပုဝါကို မိမိတစ်ဦးတည်း အသုံးပြုပါ ဘက်တီးရီးယားပိုးရောဂါများမှ ကင်းဝေးရန် လက်သုတ်ပုဝါကို သီးသန့်အသုံးပြုပါ။ လက်ကိုင်ပုဝါဆောင်ပါ … Read more
ဆီးချိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ငှက်ပျောဖူးစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ
ဆီးချိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ငှက်ပျောဖူးစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျေွးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်စားနေရပြီပေါ့ရှင်။ စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့်သွင်းရောင်းချကြပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည်မှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။ ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ သွေးအားနည်းရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ္နာတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်တေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လစဉ်ဓမ္မတာမှန်စေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကိုလည်းလျှော့ကျစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သွေးတိုးလည်းကျစေပါတယ်။ … Read more
အသည်းကိုသန့်ရှင်းတဲ့သဘာဝဆေးတစ်ဖုံ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေ ပါ၀င်နေပါတယ်။ အဲဒီ အဆိပ်အတောက်တွေကို သင့်ရဲ့ အသည်းက ဖယ်ရှားပေးတယ်၊ ဖြေပေးတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အသည်း အားကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့် အသည်း သန့်ရှင်းနုပျိုစေဖို့ သဘာ၀ ဆေးတဖုံအကြောင်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး စသဖြင့် ပိုးတွေဟာ အသည်း ထိခိုက်အားနည်းနေမှ တွယ်လို့ရတာပါ။ အသည်းဟာ သန့်ရှင်း အားကောင်းနေရင် ဒီပိုးတွေ မတွယ်ကပ်နိုင်ပါဘူး။ အသည်းကို ပိုးမတွယ်အောင် ဆေးကြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အသည်းဆေးကြောဖို့ အတွက် သင်သောက်သုံးပေးရမှာက မြန်မာပြည်မှာ လက်လှမ်းမီပြီး အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းကို ဆေးဖို့ အကောင်းဆုံးက သဘာ၀က ပေးတဲ့ … Read more
သွေးပေါင်ကျဆေးနီးပါးအစွမ်းထက်တဲ့ နေ့ခင်းတစ်ရေးအိပ်ခြင်း နေ့ခင်းအိပ်ရတာ ကြိုက်လား။ သတင်းကောင်းရှိတယ်နော်။ နေ့ခင်း တစ်ရေးအိပ်တာကသွေးပေါင်ကျဆေးသောက်စရာ မလိုဘဲသွေးတိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းပေးနိုင်ပါသတဲ့နော်။ နေ့ခင်းတစ်ရေးအိပ်တာက မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေတယ်ဆိုတာကတော့ အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတွေအရသိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ အခုတစ်ခေါက်လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုမှာတော့ နေ့ခင်းတစ်မှေးမှေးတာကသွေးတိုးကျစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့ခင်းတစ်မှေးအိပ်ပါ ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ သွေးတိုးကျပါလိမ့်မယ် လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရ နေ့လယ်နေ့ခင်းတစ်ရေးအိပ်တာက သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်လို့ သုတေသီတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးအိပ်တာမဟုတ်ရင်တောင် အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ထမင်းစားပြီးချိန် ခုံမှာ မျက်လုံးလေးမှိတ်လို့ ခဏလောက်မှေးတာကလည်းသွေးပေါင်ကျစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အားပြည့်သွားစေပြီး စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေမှာ အမှန်ပါ။ ဂရိနိုင်ငံVoulaမြို့မှာရှိတဲ့ Asklepieion အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံက သုတေသီတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုအသစ်မှာ နေ့လယ်ခင်းတစ်မှေးအိပ်တာက သွေးပေါင်ကျစေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ နေ့လယ်ခင်းမှာ တစ်မှေးအိပ်တာကြောင့် သွေးပေါင်ကျတာက ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲမှုကြောင့်သွေးပေါင်ကျတဲ့ ပမာဏနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဥပမာပြောပြရရင် ဆားလျှော့စားတာ၊ အရက်လျှော့သောက်တာတွေကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်က ၃ mmHg … Read more
ဒန့်သလွန်လက်တစ်ဆုပ်နဲ့ ရောဂါအမျိုးသုံးဆယ် ကျွန်တော်ကတစ်ပတ်ကိုဒန့်သလွန်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်စီကို၂ခါလောက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဒန့်သလွန်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်ကြော်စားရင်းနဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းသတိရပြီးမျှဝေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒန့့်သလွန်ရွက်ရဲ့အံ့သြဘွယ်ရာကောင်းကျိုးတွေန်းစီပြီးပြောပြပါမယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကနို့ကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့ကလေးမိခင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီကလေးအမေဟာဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချိုသောက်ပြီးနောက်မှာအဖြူရောင်နို့ရည်တွေပန်းပြီးထွက်လာတာကိုအံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့၊ရွှေဘုံသာလမ်းကသူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင်သွေးတိုးဆီးချိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာ။သွေးက၁၈ဝလောက်တက်တယ်၊ ဆီးချိုက၄ဝဝလောက်တက်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်သက်ဆိုးရှည်နိုင်ပါ့မလဲ။ သို့သော်ဒန့်သလွန်ရွက်ကိုထောင်းပြီးသောက်လိုက်တော့သွေးတိုးရောဆီးချိုပါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုအံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင်အသက်၉ဝနီးပါးရှိနေပါပြီ၊ကျန်းမာဆဲပါပဲ။ တောရွာတွေမှာဆောင်းတွင်းမိုးတွင်းဆိုရင်ကလေးလူကြီးအများစုနှာစေးနှာမွှန်အအေးမိကြလေ့ရှိတယ်။ ဟတ်ချိုးဆိုတဲ့အသံဟာရွာလုံးကျွတ်ပဲ။ ဒန့်သလွန်ဟင်းခါးပူပူလေးတွေပေးသောက်လိုက်တော့အချိန်တိအတွင်းမှာပျောက်ကင်းသွားကြတယ်။ ရေရှားတဲ့တောရွာလေးတစ်ခုကိုရောက်စဉ်ကလည်းအဲဒီရွာကရေတွေကနောက်လွန်းတဲ့အတွက်သောက်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒန့်သလွန်စေ့ကိုအမှုန့်ထောင်းပြီးခပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေကြည်ရေသန့်ကိုရပါတယ်။အံ့သြစရာကြီးပါ။ အဲဒီတောရွာကလူတွေပြောပြချက်အရဒန့်သလွန်ပင်ဟာဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲဆိုရင်အပင်ကိုဘယ်လိုသတ်သတ်မသေပါဘူးတဲ့။ သူ့အစေးနဲ့သူပြန်လည်ပတ်ဖွဲ့ပြီးအပင်ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်သူ့ဟာသူပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအံ့သြဘွယ်ရာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဒန့်သလွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဆာရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေသိရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာကိုတောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒန့်သလွန်ကိုသေချာသုတေသနပြုကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာချက်တွေအရဒန့်သလွန်မှာလူ့အကျိုးပြုဗီတာမင်တွေသတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီးအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးစွမ်းပါတယ်- ၁)စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်း ၂)သွေးတိုးကိုချပေးနိုင်ခြင်း ၃)ကင်ဆာအဖုအကျိတ်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း ၄)အနုဇီဝပိုးများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း ၅)နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း ၆)သွေးအားကောင်းခြင်း ၇)အင်စူလင်ကဲ့သို့အာနိသင်ရှိခြင်း ၈)အဆီချပေးခြင်း ၉)ရောင်ကိုင်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးခြင်း ၁၀)အင်နာဂျီတိုးတက်စေခြင်း ၁၁)ကော်လက်စတြောချပေးခြင်း ၁၂)ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပဒဏ်ရာများကိုပျောက်စေခြင်း ၁၃)ကိုယ်တွင်းအဆိပ်များကိုထုတ်ပေးခြင်း ၁၄)နှာစေးနှာမွှန်ခြင်းကိုပျောက်စေခြင်း ၁၅)ဂေါက်ရောဂါကိုသက်သာစေခြင်း ၁၆)ကလီစာလုပ်ငန်းများကိုကူညီခြင်း ၁၇)အဆိပ်အတောက်ပြေခြင်း ၁၈)ဆီးချိုချပေးခြင်း ၁၉)ဆံပင်သန်စေခြင်း ၂၀)ဖက်ခွက်နာပြည်တည်နာကိုပျောက်စေခြင်း ၂၁)အသားပိုမထွက်အောင်တားဆီးခြင်း ၂၂)ကာမအားတိုးပွားစေခြင်း ၂၃)ကိုယ်ခံအားတက်ခြင်း ၂၄)မျက်စိအမြင်ကြည်လင်စေခြင်း ၂၅)စိတ်ကျရောဂါကာကွယ်ပေးခြင်း ၂၆)အသားရေလှပခြင်း ၂၇)ခံနိုင်ရည်အားကောင်းခြင်း ၂၈)အဆစ်အမျက်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေခြင်း ၂၉)မှိုရောဂါကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း ၃၀)အင်တီအောက်ဆီ့ဒင့်ကြွယ်ဝခြင်းစသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဆိုရင်တော့ဒန့်သလွန်ရွက်ကိုစားဖို့သင့်ပြီပေါ့။နိုင်ငံတကာမှာဒန့်သလွန်ဆေးတွေကစျေးသိပ်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့နေရာအနှံ့တွေ့ရပါတယ်။မြေရှိသူများအပင်စိုက်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပေါများစွာရနေတဲ့အတွက်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်စားပေးကြပါ။အများကြီးစားစရာမလိုပါဘူး။တစ်ခါစားရင်လက်တစ်ဆုပ်လောက်ပါပဲ။ စားတာကတော့လက်တစ်ဆုပ်ဆိုပေမဲ့ရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့………… ချစ်ခင်လေးစားလျှက်……….. … Read more